INDLELA YOKWENZA IGUMBI LOKULALA ELINCINCI LIBUKEKE LIKHULU - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Indlela yokwenza igumbi lokulala elincinci libukeke likhulu
Igumbi lokulala elincinci linokuba nobukhulu obulinganiselweyo, kodwa akufuneki luzive lincinci. Yiya ngaphaya kwemida kwaye uhombise isithuba sakho esincinci ngendlela enomoya kwaye evulekileyo kwaye uziva nje ubanzi. Nazi iingcebiso ezimbalwa zokutyhala ubuchule bakho ukuya kumda kwaye uye ngaphaya kwemida yendawo yegumbi lakho lokulala
Imibala yombala Imibala ekhanyayo ibonakalisa ukukhanya kwaye yenza igumbi live ngathi linomoya. Yenza ukutyibilika kunye neendonga zinombala okhanyayo kwimvakalelo yobunzulu kunye nobubanzi. Sebenzisa umbala wombala omanyeneyo. Cinga ngokugcina imibala-ukukhanya kunye nokungathathi hlangothi okuya kunceda ukubonakala ukwandisa indawo yakho.
Sebenzisa imibala eyahlukeneyo enombala ofanayo kuyo yonke into ukusuka kwepeyinti ukuya kulungiselelo nakwizincedisi. Imibala eyahlukeneyo yombala ofanayo iboleka ukuhambelana okubonakalayo okuchaphazela igumbi kwaye kuya kuyenza ivakale ngakumbi.
Sebenzisa iiwindows zakho -Zama ukushiya iifestile zingatyhilekanga ukuze usebenzise ukukhanya kwendalo. Ukukhanya kwendalo makungene kubunzulu. Ukuba ukhathazekile malunga nokuba ngasese, zama ukusebenzisa i-shades okanye iimfama endaweni yamakhethini. I-sheer drapes ikwabolekisa ngasese ngelixa ilaphu lokukhanya lonyusa ukuziva komoya. Yenza i-drapes umbala ofanayo wodonga. Oku kuyabavumela ukuba badibanise kwaye bandise imvakalelo yendawo.
Benze bajonge phezulu - Zoba iliso labantu phezulu ukuze wenze igumbi libukeke lide kwaye liziva likhulu. Eyona ndlela ilula yokwenza oko kukupenda isilingi. Gubungela uphahla lonke ngepateni enomdla okanye umbala okanye iindawo ezithile. Unokuzama ukongeza isithsaba sokubumba isithsaba okanye unciphise ujikeleze umjikelezo wesilingi ukuze wongeze umphumo. Ikhuselo leshedyuli ebhedini nayo ingongezwa ukuze ibenempembelelo entle kwaye ikhuphe amehlo phezulu.
Benze bajonge phezulu ngokubeka iishelfu okanye bavule amatyala encwadi kufutshane nophahla. Ezi zinenjongo ezimbini zokubonisa indawo kunye nokugcina ngaphandle kwendlela. Amatyala encwadi yomgangatho ophezulu aya kuthi agxininise kubude bodonga kunye nokuphakama kwesilingi. Ukuhombisa igumbi lomntwana zama ukusebenzisa izincamathelisi ezincamathelayo okanye eludongeni oluncinci ukuhombisa inxenye yesilingi.
Imivumbo egudileyo Imigca ethe tyaba kwigumbi lokulala elincinci linokwandisa igumbi. Qeqesha imigca ukuya kubude begumbi elilelona lide, liyenza ukuba ibonakale inde. Umgangatho onemigca okanye onemigca enemigca enomdla nenomdla.
Imigca emi nkqo eludongeni, inika umbono wokuphakama, kodwa imitya ethe tye inokusebenza nayo. Zama ukongeza umgca othe tye wepeyinti okanye iphepha lodonga, isiqingatha phezulu okanye ngaphezulu kodonga lwakho. Qinisekisa ukuba yahlukile eludongeni ukuze ime. Oku kuyakwenza ukwahlula okubonakalayo okuya kwenza udonga lwakho lubonakale lude kwaye igumbi lakho libanzi.
Ifanitshala yendawo - Ifenitshala ayithathi nje indawo; inokongeza ukukhohlisa kwendawo. Isakhelo sebhedi esonyusiweyo, isofa encinci okanye izitulo eziphakanyiswe emilenzeni, itafile yokunxiba enemilenze evulekileyo - ezi zilungele indawo encinci. Ukukwazi ukubona indawo phakathi kokubonelela kunye nomgangatho kwenza kubonakale ngathi igumbi linendawo ethe kratya.
Sebenzisa ifanitshala enomsebenzi ongaphezulu kwesinye. Isitulo seenyawo setafile yokubonisa esezantsi okanye indawo yokuhlala eyongezelelweyo. Isifuba esisicaba sokugcina okanye itafile. Iibhedi ezakhiwe kwiidrowa. Isifuba esincinci esiphakamileyo setafile esecaleni kwebhedi.
Izibuko-Ukubonakaliswa kwesipili kunokunyusa ngokwenyani indawo yakho yokulala kwaye kuncede ukuyikhanyisa. Singasathethi ke ngezibuko ezongeza ubukhazikhazi kwigumbi lokulala elingaphakathi.
Amagumbi okulala angaphakathi ahambelana nawo:
Uyilo lwegumbi lokulala lamaRoma - Imibono yeGumbi lokulala loMthengi - Uyilo lwegumbi lokulala eliyintloko - Iingcamango zokulala zale mihla
iikhitshi zomqondo ovulekileyo
Umtshato kaDonald melania Trump
kutheni iintyatyambo zibiza kangaka
izinto ukuphosa emtshatweni
kufanele utshate nini